dib u soo celinta qalabka lacagta lagu bixiyo addons?
dib u soo celinta qalabka lacagta lagu bixiyo addons? sano 2 6 bilood ka hor #881
hello guys at rikoooo! Waxaan leeyahay xoogaa payware fiican addons laakiin uma muuqato inay raadinayaan aayatiin iyaga u gaar ah. fadlan wax ma ka dhigi kartaa wax this? im codsashada xoogaa dayactir ah:
Nooca CLS 747-200 HD:
El Al (iyo cargo) (OC):
Captain Sim 737-200 (ama Adv)
Waad ku mahadsan tahay haddii ay suurtogal tahay in ay noqon lahayd mid weyn!